Khadka Shiinaha waxa aad ka iibsato canshuur baa ku waajibta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khadka Shiinaha waxa aad ka iibsato canshuur baa ku waajibta
La daabacay torsdag 21 december 2017 kl 11.45
Dad badan ayaa ka iibsado alaabooyin khadka shirkado ku yaalla dalka Shiinaha balse ma bixiyaan lacag canshuur oo ku waajib ah taasina waxay qasaare weyn ku tahay dowlada oo halkaasi ku weysa boqolaal milyuun karoon, sida ku cad qiimeeyn ay wada sammeeyeen waaxda cashuuraha xaduudaha iyo ee Tullverket iyo hay’adda boostada ee Postnord
Waaxda canshuuraha xaduudaha ee Tullverket, oo ka mas’uul ah hubinta in dadka macaamiishu bixiyaan canshuurta dahsoon (momsen) ee badeecooyinka, afka Swedish-ka lagu yiraahdo ”momsen”, balse wakaaladdu ma sammeyso wax kontorool ah imminka.
Åsa Wilcox, oo ah mas’uul ka tirsan wakaaladda Tullverket ayaa sheegtay inuu arrinkani yahay mid la xiriira cashuur la iska doonayo in la bixiyo.
Haddii aan dalbado qolof mobayl oo sicirkiisu yahay 100 kronor, waxaa waajib igu ah in aan bixiyo 25 kronor oo canshuur ah. Balse haddii hay’adda canshuurta ay iyadu isku daydo in ay soo uruuriso 25 kaasi koron, qarashka intaasi wuu ka sii badanayaa.
Xiisaha in khadka laga iibsado alaabooyinka Shiinaha lagu farsameeyo ayaa aad u korortay iyada oo imminka mid ka mid ah saddexdii baakadood ee alaabooyinka dibedda laga soo iibsado, uu ka yimaado dalka Shiinaha.
Canshuurta dahsoon ayaa ah in la bixiyo iyada oo aan loo eegeyn sicirka badeecada waxayna inteeda badan tahay 25 boqolkiiba. Hay’adda adeega boostada ee Postnord, oo iyadu maareysa ku dhowaad 150 000 baakadood oo maalin walba ka yimaada dalka Shiinaha, kuwaasina oo soo mara garoonka diyaaradda, ayaa sheegtay in, in yar mooyee, inta badan baakadaha loo gudbiyo macaamiisha ay ku socdaan iyada oo aan la raacin warbixin ah inay qofka waajib ku tahay canshuur.
Åsa Wilcox, mas’uul ka tirsan wakaaladda canshuurha ee Tullverket ayaa leh.
–Waxaa jira dad badan oo aan ogeyn ama aan ku fekereyn in alaabta ay dibedaha ka dalbadaan laga doonayo canshuur .
Wakaaladda canshuuraha xaduudaha ayaan maanta lama socon in shaqsiyaadka caadiga ah bixiyaan canshuuraha saaran badeecada ama inta ey le'eg yihiin tirada bixisa, sidoo kale waxaan la ogeyn tirada dhabta ah ee lacagta dowlada ku weyso arrinkan hase yeeshee hay’adaha boostada iyo canshuurtu ey ku qiimeenayaan kharashka dowladda hareera mara in uu yahay ugu yaraan inta u dhaxeysa nus bilyan ama hal bilyan oo kronor sanadkii. Wuxuu khasaaraha intaasi le'eg uu wel wel geliyay wasiiradda maaliyada Magdalena Andersson (S).
– Waa dhibaato in canshuurtaasi aysan soo xaroon. Waa lacag aadi lahayd howlaha iskuullada, daryeelka caafimaad, bileyska iyo militeriga, ayay tiri wasiiraddu.
Dowlada ayaa la filayaa in ay u dhiibto wakaalada uruurisa canshuuraha xaduudaha wargelin ku aadan in ay soo diyaariso nidaam lagu uruurin karo lacagta lumeysa, waxaana qeyb ka ah howsha in bulshada loo gudbiyo macluumaad sannadka fooda inagu soo haya.
Arrinkan ayaa sidoo kale looga hadlayaa si dar dar leh midowga Yurub oo dhan waxaana la diyaarinaya sharci shirkadaha leh bogagga wax laga iibsado in la saaro mas’uuliyad dheeri oo ah iyo iney macaamiisha ka qaadaan canshuurta alaabooyinka ey ka iibiniyaan, waxaana la filayaa in sharcigaasi dhaqan galo sannadka 2021.